Xaaladda hidda-socod waa jirro ay keento isbeddel ku yimaad hidda-wade. Waxa jira kumanyaal xaaladaha hidda-socodka, iyo kuwo cusub oo la ogaanayo wakhti kasta.
Jidhkeenu wuxu ka samaysan yahay kumanaan milyan oo unug. Unug kasta gudihiisa waxa ku jira tiro hidda-wadayaal ah. Hidda-waduhu waa jidhka “tilmaantiisa”. Jirkeenu wuxuu akhriyaa hidda-wadaha oo uu u adeegsadaa tilmaanihiisa si uu u sameeyo maadada borotiinka ee aynu ka koobanahay. Tusaale ahaan, waxa jira hidda-wadayaal sida waxyaabaha midabka indhaha iyo dhererka.
Salal: Aashitada bu’da (nucleic acids) ama kiimikada ku jirta DNA. Magacyada kiimikadu waa adenine (A), cytosine (C), guanine (G), iyo thymine (T).
Lamaanaysha salka: salalka iska soo hor jeeda ee dunta DNA. A waxay markasta ku lamaan tahay T, iyo C oo markasta ku lamaan G.
Unugyada: waxay dhisaan xubnaha jirka.
Koromosomis: waa xidhmooyin dhaadheer oo ah dunta DNA. Koromosomis waxa laga helaa iyaga oo lamaana bu’da unugga. Dadku waxay leeyihiin 23 lamaano ah oo koromosomis ah.
DNA (deoxyribonucleic acid): duno warwareegsan oo ah kiimikada uu ka samaysan yahay koromosom-ku.
Asal-wade: qaybta dunta DNA. Halka asalwade waa xadhig salal badan leh.
Bu’da: qaybta unugga ee uu ku jiro DNA.
Hidda-wade kasta oo ku jira jidhkaagu wuxuu leeyahay laba nuqul. Marka dadku ilmo dhalaan, waxay gudbiyaan hal nuqul oo hiddawade kasta oo jidhkooda ku jira. Ilmuhu markaas wuxu wataa xirmo dhan oo hiddawadayaasha aabaha iyo xirmo dhan oo xagga hooyada.
Marmar, isbedel ayaa ku imaan kara hiddawade. Isbedelo cusub ayaa waqti walba ku dhaca jidhkeena. Badanaa isbedelaasi waa yaryahay oo ma keenaan dhibaato waayo:
waxa laga yaabaa in aanay bedelin macnaha fariinta.
jidhku waxa laga yaabaa inuu u baahan yahay hal nuqul oo shaqaynaya si fariintu shaqada u qabto.
Haddii uu isbedel dhab ah ku yimaado hiddawadaha unuga shahwadda (aabaha unugiisa galmada), ama unuga ukunta (hooyada unugeeda galmada), waxay u gudbi kartaa ilmaha. Markay taasi dhacdo, waalidku ma laha xaaladda hidda-socodka laakiin ilmaha ayaa qaba.
Wax laga samayn karaa ma jiraan waxa keenay ama lagaga hortagi isbedelka hidda-wadaha. Badanaa ma jirto si ay waalidku ku ogaan karaan in isbedel dhacay illaa ilmahoodu bilaabo inuu yeesho calaamadaha xaaladda jirta.
Baadhitaanka hidda-socodka waxa loo adeegsan karaa si loo xaqiijiyo ogaanshaha cudur. Hase ahaatee, haddii xataa baadhitaanka laga waayo isbedel, waxa laga yaabaa inuu qofku misana qabo xaalad hiddasocod. Weydii dhakhtarka ama la-taliyaha hidda-socodka si aad u hesho inta ay le'egtahay runta baadhitaanka hidda-socodku.